Pocophone F2 wuxuu ahaan doonaa mid dhab ah kahor dhamaadka sanadka | Androidsis
Muddo bilo ah waxaan maqalnay warar xan ah oo ku saabsan Pocophone F2, oo ah dhamaadka labaad ee sare ee sumadda Shiinaha ee ay leedahay shirkadda Xiaomi. Moodelkan ayaa la filayaa inuu leeyihiin naqshad cusub. In kasta oo bilahaan, ay sabab u tahay guusha Redmi ee suuqa, waxay umuuqataa in daahfurka qaabkani uu kusii fogaanayo marba marka kadambeysa. Waxaan ugu dambeyntii helnay warar dheeraad ah oo ku saabsan imaatinka taleefankan.
Xaqiiqadu waa tan Daahfurka Pocophone F2 ayaa dhici kara sanadkan sida horeyba looga sheegay warbaahinta kala duwan. Farriin qoraal ah oo ka soo baxday astaanta Shiinaha ayaa ah tan kicisay warkan. Marka dhowr bilood gudahood waxaan ku baran karnaa dhamaadka-sare.
Waxay ahayd agaasimaha shirkadda ee Hindiya oo soo galiyay qoraal soo saaray rajada laga qabo goorta Pocophone F2 la bilaabi doono suuqa. Laakiin waxay u muuqataa taas Waxay ahaan laheyd rubacii ugu dambeeyay sanadka markaan la kulmi doonno si rasmi ah. Uguyaraan tan durba waa la xantaa.
Taleefanka laftiisa ma jiraan wax faahfaahin ah xilligan. Waqti ka hor waxaa la sheegay in nashqadeynta ay la imaan doonto isbedello, laakiin qeexitaannada aan ka filan karno wax war ah kama hayno illaa hadda. Kaliya waxay noqon doontaa dhamaadka-dhamaadka kale.
si Waxaan si taxaddar leh u dhegeysan doonnaa xogta cusub ee ku saabsan tan Pocophone F2 ee sumadda Shiinaha. Gaar ahaan hadii la bilaabayo ay dhaceyso kahor dhamaadka sanadka maadaama hada si maldahan loo sheegay. Waxay noqon laheyd daah furid balanqaadaysa inay soosaarayso dulsaar, kadib waqti dheer oo sugid iyo xan.
Tan iyo guushii Redmi, oo xitaa soo saaray telefoonno heer sare ah, ayaa cabsi badan ka muujiyay in Pocophone F2 uusan waligiis arki doonin iftiinka maalinta. Xitaa in calaamadahani ay ku dambayn doonto in laga waayo suuqa. Laakiin waxay umuuqataa inaysan taasi dhici doonin dhawaana waxaan heli doonnaa jiilkeedii labaad oo diyaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Pocophone F2 ayaa imaan kara ka hor dhamaadka sanadka
LG G8s ThinQ xakamaynta tilmaamaha xiisaha leh ee qaaciddada caadiga ah